Exchanges Crypto mana chete kuteerera zvinodiwa South Korean regulator - Blockchain News
In mukupera Ndira, zvikazikamwa pamusoro pamutemo nezviremera South Korea pamusoro kusazivikanwa kwema mu cryptocurrencies, izvo vapinda simba musi January 30. Maererano zvinodiwa Financial Services Commission of South Korea (FSC), mabhanga matanhatu kunge wakanyengwa vatange kwezvivako kusika zvemari mazita chaiwo. zvisinei, sezvo zvikazooneka gare gare, mabhanga havadikanwi kupa mabasa matsva kuti vatengi kuti Cryptocurrency Exchanges.
“Pakusikwa nyaya itsva kupiwa mari Exchange ndiyo chisarudzo nokuzvidira pakati pamahombekombe,” mumwe rwezvemabhengi indasitiri mukuru akaudza South Korea pakadhindwa Yonhap. anotsanangura: “Banks kuti vane zviri pamutemo mitoro kudzivirira mari laundering vari kuongororwa chete zvemukati zvesangano: kusimbisa nemakasitoma kubva crypto Exchange, Kugadzikana wegadziriro, kudzivirirwa mushandisi mashoko uye zvaidiwa Anti-mari laundering dzemunharaunda.”
Pakati mabhanga matanhatu ambotaurwa, matatu chete – Shinhan Bank, Nonghyup Bank uye Industrial Bank of Korea – muvatsvakire nyaya kuti vatengi kuti Crypto Exchanges. Uye chete mana 25 South Korean mari Exchange exchanges zvakachinja kusazivikanwa nyaya nhoroondo nemazita chaiwo. saka, idzva zvinodiwa zvemitemo anoenderana Bithumb, Upbit, Coinone uye Korbit.
Maererano Asia Economic, Shinhan Bank, iyo inoshanda Bithumb, akasarudzawo vanomboenda haabatanidzi mukutsinhana kubva muitiro rakasikwa zvemari mazita chaiwo. Mumiririri kubhangi akatsanangura kuti izvi chiyero wabatwa nezvichaitika yokuti “exchange iri achiongorora nemapurisa” kune rokupedzisira regore ugororo.
Small uye svikiro kadikidiki exchanges kuti anopa yemakambani nhoroondo, pane chaivo vane, chengetedza zvimwe zvinodiwa. Maererano Yonhap chinyorwa, pari zvino, kushandiswa yemakambani nhoroondo anobvumirwa inopiwa kuti exchanges anogona kutsigira zvizere zvavaifanira kudzivirira mari laundering, uyewo kusimbisa kuziva vatengi. Pamusoro pe, vachanzi pasi “Kunyatsoparidza kuongororwa nemabhengi nezviremera zvemari.” zvisinei, exchanges vazhinji havana kutambira simbiso nenhoroondo itsva uye akaudza Yonhap venhau kuti vaizova misa kwema kana mamiriro ezvinhu haana kuchinja. Maererano Korean Blockchain Association, pamusoro 787,600 Vatengi vanoshandisa kuminamato exchanges dzakadaro, vane ndeizvi Parizvino ari mupurigatori.
Nigel Green, CEO pamusoro ...
Previous Post:Coinbase anotanga kwokupedzisira kuidzwa Segwit
Next Post:Havasi miners zvose vachapona mutengo rutapudzo bitcoin
Chivabvu 11, 2018 pa 6:41 AM